တရုတ် Ningbo Hicon စက်မှုလက်မှု - HTHA စီးရီးရေပိတ်ထိန်းချုပ်ရေးအဲယားကွန်းယူနစ်အအေး
ကြှနျုပျတို့ကို Call: 0086 574 62132957
Air ကို Split ကိုပြွန် type ကို AC အအအေး
mini ကို Chiller
Scroll သည်ရေ Chiller
centrifugal ရေ Chiller
Hot Air ကိုရင်းမြစ်စုစုပေါင်းအပူ Recovery ကိုရေအပူပေးစက်ယူနစ်
မိုးလုံလေလုံရေကူးကန် AC အယူနစ်
Precision AC အ
Air ကိုကြမ်းပြင်အမြဲတမ်း AC အအအေး
ရေအထုပ် AC အအအေး
base station ကအေးယူနစ်
crane Cab Cooler ယူနစ်
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရိန်း A / C ယူနစ်
High- အပူချိန်ရေ chiller
အဏ္ဏဝါ & ကမ်းလွန် HVAC
package AC အယူနစ်
Air ကိုကိုယ်ပိုင် AC အပါရှိသောအအေး
ရေကိုယ်ပိုင် AC အပါရှိသောအအေး
Air ကိုအထုပ် AC အအအေး
ယူနစ် Air ကို Cooler
AC အအပူ Exchange
A) ကို UF: ရေပင်မအင်္ဂါရပ်များဒီရေအနီးကပ်ထိန်းချုပ်လေအေးပေးစက်မျိုးစုံ optional ကိုလေကြောင်းထောက်ပံ့ရေး Modes သာ, အမည်ရအတော်ပင်အအေးပိတ်ထိန်းချုပ်ရေးအဲယားကွန်းယူနစ် 1. အအေးရှေ့ပြန်လာလျက်ထိပ်တန်းထောက်ပံ့ရေး; B) မှ S က: ရှေ့ပြန်လာ / ထောက်ပံ့ရေး; ကို C): D: ထိပ်တန်းပြန်လာလျက်အောက်ခြေထောက်ပံ့ရေး; : D) UD: အောက်ဆုံးပြန်လာလျက်ထိပ်တန်းထောက်ပံ့ရေး; E) နဲ့ UB: နောက်ကျောပြန်လာလျက်ထိပ်တန်းထောက်ပံ့ရေး, အအေးအဘို့ဖောက်သည် '' ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်နိုင်သည့်; 2. electrostatic မှုန်ရေမွှားများကကုသခဲ့ကြရသောအအေးရှင်းပြီသတ္တုပြားများနှင့်အတူအသငျ့ ...
A) ကို UF: 1. ဒီရေအနီးကပ်ထိန်းချုပ်လေအေးပေးစက်မျိုးစုံ optional ကိုလေကြောင်းထောက်ပံ့ရေး Modes သာ, အမည်ရအတော်ပင်အအေးရှေ့ပြန်လာလျက်ထိပ်တန်းထောက်ပံ့ရေး; B) မှ S က: ရှေ့ပြန်လာ / ထောက်ပံ့ရေး; ကို C): D: ထိပ်တန်းပြန်လာလျက်အောက်ခြေထောက်ပံ့ရေး; : D) UD: အောက်ဆုံးပြန်လာလျက်ထိပ်တန်းထောက်ပံ့ရေး; E) နဲ့ UB: နောက်ကျောပြန်လာလျက်ထိပ်တန်းထောက်ပံ့ရေး, အအေးအဘို့ဖောက်သည် '' ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်နိုင်သည့်;
2. electrostatic မှုန်ရေမွှားများကကုသခဲ့ကြရသောအအေးရှင်းပြီသတ္တုပြားများနှင့်အတူအသငျ့, ဒီရေကိုအနီးကပ်ထိန်းချုပ်လေအေးပေးစက်ချေးဖို့အလွန်အမင်းခံနိုင်ရည်အအေး။ Cooper ပြွန်နှင့် hydrophilic လူမီနီယံသတ္တုပါးပါဝင်သည်ဟု၎င်း၏ heat exchanger, မြင့်သောလုပ်ငန်းခွင်ထိရောက်မှုရ၏
3. ဒီစက်မှုဇုန်ကိုရေ aircon တစ် laconic ဖွဲ့စည်းပုံမှာအတော်ပင်သောယုံကြည်စိတ်ချရသောရေ-side heat exchanger တပ်ဆင်ထားသည်အအေး;
5. ဒီအနီးကပ်ထိန်းချုပ်စက်မှု A / C ယူနစ်များ၏တွန်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှု box ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတော်လေးလွယ်ကူသည်, ထိုမိုးလုံလေလုံအခန်းထဲမှာတပ်ဆင်ထားကြသည်;
6. တိုင်း condenser ထိရောက်စွာယိုစိမ့်တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ငွေ့ရည်ဖွဲ့ပန်းကန်နှင့်အတူပူးတွဲလျက်ရှိ၏
ယင်း၏သတ္တုပြစ်မှုဆိုင်ရာအသီးအသီးနှင့်အတူ 8. တိတ်ဆိတ်ဝါဂွမ်းနှင့်အတူတေးသံ, ဒီစက်မှုဇုန် Air-အအေးလေအေးပေးစက်ယူနစ်စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းအများကြီးနိမ့်ဆူညံသံစေသည်။ အဆိုပါစံဖြုတ်ပြားယင်းစစ်ဆေးရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအများကြီးပိုလွယ်နှင့်အချိန်-စားသုံးနည်းသည်ဖြစ်စေ၏
9. ၎င်း၏အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်တိကျစွာ 18 ℃ ~ 28 ℃, ± 1 ℃နှင့်စိုထိုင်းဆထိန်းချုပ်မှုတိကျစွာ 50% ~ 70% ဖြစ်ပါသည်, 5% RH အ ~ 10% RH အ±။
10. ဤအအနီးကပ်ထိန်းချုပ် A / C ပစ္စည်းကိရိယာများအရည်အသွေးလျှပ်ကူးပစ္စည်း humidifier တပ်ဆင်ထားသည်။
ယူနစ်မော်ဒယ် HTHW- 18 25 30 35 45 55 65 90 120
စွမ်းရည်မြှင့်အေး kW 19,9 27.6 33.2 38,3 48,3 59,7 69,8 91,4 123,7
input ပါဝါအအေးသည့်အခါ kW 6.1 8.2 10.2 11.7 14.6 17.9 20,6 26.8 35,8
လျှပ်စစ်အပူပေး① kW915 18 22 27 33 39 50 68
စွမ်းအား 380V ~ 415V 3Ph 50Hz
ကွန်ပရက်ဆာအမျိုးအစား hermetic စာလိပ်အမျိုးအစား
ကွန်ပရက်ဆာ Q'ty PC များ24
ရေခဲသေတ္တာအသံအတိုးအကျယ် ကီလိုဂရမ် ကြေးနီပြွန် + လူမီနီယမ်တောင်
ဝါသနာရှင်အမျိုးအစား အနိမ့်ဆူညံသံ centrifugal အမျိုးအစား
Air ကိုထောက်ပံ့ရေးအသံအတိုးအကျယ် မီတာ 3/ ဇ 4100 5600 6600 7700 9700 12000 13600 17000 23000
condenser အမျိုးအစား shell ကိုနှင့်ပြွန်အမျိုးအစား
ရေစီး မီတာ 3/ ဇ 4.367 8.3 10.5 13 15.2 19,7 28,6
ရေဖိအားကျဆင်း KPA 32 34 35 36 26 33 36 38 39
ရေပိုက်အရွယ်အစား G1-1 /2" G1-1 /2" G1-1 /2" G1-1 /2" G2 မှာ " G2 မှာ " G2 မှာ " G2-1 /2" G2-1 /2"
Humidifier အမျိုးအစား လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမျိုးအစား
humidifier ၏ input ပါဝါ kW33 6.1 6.1 6.1 9.8 9.8 11.4 17.5
စိုထိုင်းဆစွမ်းရည် ကီလိုဂရမ် / h44 8 8 8 13 13 15 23
humidifier ၏ရေပိုက်အရွယ်အစား φ1 /2"
Temp ထိန်းချုပ်မှုအကွာအဝေး 18 ℃ ~ 28 ℃± 1 ℃
စိုထိုင်းဆထိန်းချုပ်မှုအကွာအဝေး 50 ~ 70% ± 5% RH အ ~ 10% RH အ
air ကို filter ကို G3 မူလတန်းအမျိုးအစား
ဆူညံသံ DB (က) 62 64 65 66 68 68 70 73 76
ယခင်: Air ကို-အအေးပိတ်ထိန်းချုပ်ရေးအဲယားကွန်းယူနစ်
ဘက်ပေါင်းစုံရေဝက်အူ Chiller အအေး
HSLFL စီးရီးရေအထုပ် Air ကို Conditio အအေး ...
HASD စီးရီး Air ကိုကြမ်းပြင်အမြဲတမ်းလေတပ် Condi အအေး ...
အနိမ့်အပူချိန်ရေ Chiller (ဝက်အူ Com အအေး ...
NINGBO HICON စက်မှုလုပ်ငန်း CO ။ , LTD မှ
ဖုန်းနံပါတ်: 0086 574 62132957
E-mail ကို: jkd@hisurp.com